Le nkampani "Continental" is kokuchitha izindodla zemali ukuthuthukisa amathayi amasha futhi kangcono. Kusho zisetjenziselwa ekuphuculeni Ukwakheka iraba lephethini yimpandla m. N. Ngokuvamile, namaJalimane baziwa izinga zabo eziphakemeyo, yingakho amathayi Continental SportContact 5 ezinhle kakhulu. Kodwa kabanzi, sizoxoxa ngayo esihlokweni. Lapha uzothola ukusebenza, kumpendulo yekhasimende, impendulo emihle nemibi.
Oholela isikhundla emakethe
Ukuhlola iTire Continental SportContact 5 (225/45 / R17) wabonisa ukuthi laba amathayi Lifanele ukusebenza ngesikhathi ehlobo. Ziyakwazi ekahle izimoto ekilasini ezemidlalo imoto futhi crossovers wezwakalisa ezemidlalo. Kunoma ikuphi kungenzeka ukubeka amathayi okunjalo futhi sedan abavamile, ngokomzwelo lokhu akuzange elahlekile. Abakhiqizi ukuchitha imali eningi kanye nesikhathi ekuthuthukiseni lobu imodeli. Sizama ukuba aqede zonke amaphutha imodeli odlule futhi wenze "emihlanu" kufinyeleleke kalula.
Okwamanje, lo mugqa ehlobo amathayi German emakethe unendima ehamba phambili. Lokhu kuqinisekiswa eziningi ezivivinya ezihlukahlukene izimo zezulu. Sekukonke, ukukhetha kakhulu ukushayela okumayelana asphalt, kahle, kodwa manje ake sihlolisise izinzuzo Continental SportContact 5 R17.
Rubber ingxube BlackChilli
onjiniyela German okokuqala ukusebenzisa lobu buchwepheshe. Ingxube iraba isibe enokulinganisela. Manje isondo uyakwazi ukujwayeza kunoma iyiphi indawo komgwaqo. Ukusingatha ezingeni eliphezulu kakhulu igcinwa, kungakhathaliseki uhambela emgwaqeni flat noma off-road. asphalt nesasehlobo - nhlobo umehluko. ubuchwepheshe BlackChilli isebenza ngendlela yokuthi izinduku iraba kuya ebusweni komgwaqo, ngalokho lunikeze ezingeni lelisetulu sideslip futhi ethambile futhi abushelelezi ukubhidlizwa, nokungelona eyandulela.
Ukusetshenziswa iraba Ukwakheka BlackChilli ubuchwepheshe kuye kwanciphisa ibanga unyathela amabhuleki ngamaphesenti ayishumi. Lena inkomba enhle kakhulu amathayi yesimanje. Kufanele futhi ukugqamisa ukulawula nokucija. Tyres ukuphendula ngisho ithuba kancane isondo ngumshayeli. isilawuli ababhekene nesimo esinje kungabaduduza ngokuthi elungis ngaphezulu kuqhathaniswa namanzi "Quartet".
Ukuziphatha at Continental Sportcontact 5 Suv umgwaqo
AmaJalimane athuthukile umugqa ehlukile crossovers futhi SUV. Lapha kukhona izinguquko ezithile. Yena, kanye inguqulo evamile, kusikisela sporty ukushayela nge ukushesha abukhali futhi deceleration, kodwa okuhlala isikhathi eside futhi yakhelwe isisindo enkulu imoto.
Kuyaphawuleka ukuthi iphethini yimpandla masondo front futhi bakhulise Kuthi ezahlukene. Kuyadingeka ukuba ukuzivumelanisa komgwaqo. Kuyoba ukukhwela phansi ebhuqwini noma asphalt, akunandaba. "Continental" azizwa ngokulinganayo ukhululekile kunoma isiphi isimo. The main "iqhinga" umugqa yamazinga aphezulu okungabi adhesion kwamanzi komgwaqo. Lokhu kuyofezeka yimpandla nezimo futhi kube lukhuni ohlangothini izingxenye. Soft yimpandla amabhlogo uzama Nestle njengoba uvalwe ngangokunokwenzeka ukuze the asphalt, futhi olukhuni endaweni ehlombe kudala ingcindezi esingeziwe sale. Yingakho lapha endaweni engamamitha yokusingatha.
Ngokushelela futhi buthule
Akukona njalo avumele kwezemidlalo isondo Ukugibela ethule. Kodwa akunjalo mayelana Continental SportContact 5. Izimpendulo abonisa ukuthi leli sondo cishe akukho umsindo. Yingakho ezingeni wenduduzo acoustic kuyinto ezingeni elifanele. Ukuze sifinyelele le miphumela bekulindeleke ukuthi kuyaqina okusezingeni eliphezulu ngerabha futhi ngezithako zawo.
Tough futhi ebanzi endaweni ehlombe kudala umthwalo okwengeziwe oluvala amasondo. It ethula chassis semoto kwenza nokusingatha kwi zenjoloba kubhekeleke kangcono. Ukugibela Smooth, ngeshwa, kulahleka njengoba othwala. Umsebenzi yalesi iraba cishe inaudible, ngokuvamile kakhulu okukhulunywa. Kodwa lapha kubalulekile ukuqonda ukuthi okwengeziwe ephansi isondo, kulapho kuba ezinomsindo, futhi kukhona akunakugwenywa.
Pleasure akuyona ezishibhile
Asinakusho ukuthi wonke umuntu angakwazi ukukhokhela ithayi enjalo. Continental SportContact 5 amathayi premium. I ububanzi okungenani, engatholwa isendalini, - R17, futhi kubiza cishe 10 000 ruble apiece. Nakuba kuxhomeke kakhulu ijubane index. Ngokwesibonelo, R15 98Y izobiza ruble ayizigidi 54 isethi ngayinye. Ngesikhathi esifanayo, R15 91Y kubiza ruble angaba yizinkulungwane 25 (4 izicucu).
Usayizi wokugcina kuleli uhla ethulwa - R21. lapha ikakhulukazi akudingeki ongakhetha kuzo osayizi njengoba kukhiqizwa eyodwa kuphela - 245 / 35R21 96W - izindleko angaba yizinkulungwane 85 ruble isethi ngayinye. Njengoba ubona, lokhu akukona injabulo ezishibhile. Lapho ushayela sporty kukhona inala amathayi ethengekayo. Bona, yebo, ziguge isheshe, kodwa inani layo likwenza ubone kubo, kungasiko.
Ingabe kumele ngizinike Continental Sportcontact 5 SSR?
Le modeli kuphawuleka lokuthi wenziwa Self Ukusekela Runflat ubuchwepheshe. essence yayo itholakala iqiniso ukuthi emva isondo wokubhoboza usalokhu a ingcindezi ethile isikhathi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ephansi iraba, lapho wokubhoboza uzimisele ngesikhathi esisodwa. Cruising SSR amathayi abamhlaba esimweni imayelana 80 kilometres, kanye isivinini evumelekile kuleli cala - bengekho ngaphezu kwama-80 km / h.
Uma washaya kwesondo, akunakwenzeka ukushintsha namathuluzi Kungcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba balungise lateral cut ovundlile. Iningi isondo Kulezo zimo akuyona Lathan, kodwa umane baxoshwa. Uma ukuncishiselwa noma umshini wokubhoboza kwenzeka esikhathini Umhubhe ke ungakwazi ngokuphepha balidlulisele futhi uhlale endaweni lapho ngeke siphazamise ukudlula nabanye abasebenzisi bomgwaqo. Kukho konke, lokhu i choice omuhle, unikezwa okusezingeni eliphezulu maintainability amathayi.
Izibuyekezo ezingezinhle abashayeli
Naphezu kwenani ngala mathayi kuvamile kakhulu ohlangothini omubi "Continental". izikhalazo Common ziyancipha kuya share aphansi isondo. Ngokuvamile ezibucayi ukugqoka iqalisa-25 000 amakhilomitha. Kuyinto encane kakhulu, nakuba okuningi kuncike isitayela ukushayela. Kuzoqalwa nge ukushelela kanye okungazelelwe deceleration kuholela ukuguga ngaphambi kwesikhathi we yimpandla. Kodwa njengoba Ezemidlalo ibhasi, kufanele kwenzeke ukuba simelane bafake ngisho ezimweni ezibucayi.
Nokho abathengi ngokuvamile ezintweni eziyingozi inani elikhulu mbumbulu. amathayi Czech noma isi-Portuguese ayihlali isikhathi eside, sekunesikhathi eside iqiniso owaziwa. Yingakho kuyinto efiselekayo makudle amathayi German kuphela. Ngenxa yalesi sizathu ezilula, kunengqondo ukuxhumanisa bafake lakhuphuka lafika ku-manga. Yize inani layo likwenza ubone ngisho "Continental", wenza eCzech Republic, akuyona ngaphansana ibhasi evela eJalimane.
Naphezu kweqiniso lokuthi ngezikhathi ihlangabezana ongathandeki, amakhasimende kodwa wanelisekile ngakho okuningi. Rubber Continental Sportcontact 5 (205/55 / R16) siphela cishe noiselessly kule eziningi ukugcizelela. Libuye ukuziphatha ngempela unethemba phezu asphalt. Aquaplaning kwi zenjoloba cishe akukho ingozi, ngaphandle-ke, ngicela ungadluli amaxhaphozi esijule kakhulu okusheshayo.
Kepha inani layo likwenza ubone, abaningi bakuthola kunengqondo ngempela umkhiqizo izinga ezinjalo. Tyres ngempela esithambile, esinikela induduzo eyengeziwe ngesikhathi ride hhayi kuphela asphalt abushelelezi, kodwa futhi emgaqweni wobhuqu nezinye izinhlobo evele. Nokho-ke uyakufanelekela zenjoloba, kodwa ukuthenga ke uma ungenawo ukushayela ngendlela sporty, akunandaba mqondo, ngoba amandla ayo izohlala untapped.
imicabango yabantu uchwepheshe
Endaweni abashayeli ophumayo Continental SportContact 5 wadala komsindo. Yingakho ngokushesha waqala ukuhlolwa olunzulu ukuthi eqinisekisiwe ngokuhambisana nezimiso umakhi. Ngenxa yalokho, amathayi Uthole isikolo ka 9.2 aphume 10 amaphuzu. Lena sibalo ehlonipheke kakhulu, okuyinto kuqinisekisa izinga okusezingeni eliphezulu.
Hlukanisa isigaba ukuziphatha engayodwa komgandayo ezimanzi futhi omile. Njengasekhulwini lokuqala futhi esimweni sesibili, akukho izinkinga. Izinga eliphakeme ukuzinza kuqinisekiswa, kungakhathalekile isimo endleleni. Lena enye plus yengcebo yenkampani German.
AutoBildSportcars edition German ukubeka iraba Continental SportContact 5 (225/50 / R17) ekuqaleni kule simo. Kuyaphawuleka ukuthi isondo ephezulu ukusebenza nge ukuphepha margin esikhulu ngokuya aquaplaning. Control uhlala njengoba kucacile njengoba ebusweni ezimanzi futhi omile. Bucishe bulingane asabela ngayo futhi edition Swiss TCS, ngokuthi "Continental" phakathi isondo nephephile kule ingxenye intengo.
Ingabe kumele ngizinike?
Lo mbuzo ngempela ekhathaza abashayeli abaningi. Ngeshwa, impendulo eqondile Kulokhu kunzima ukunikeza. Ngakolunye uhlangothi, inani elikhulu wokubuyekezwa okuvumelekile ifakazela high iraba-German. Ngakolunye, akusiyo ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki kanye ngesikhathi esifanayo has a eliphezulu kakhulu price tag. Lokho izindleko ngokuvamile eyeka abathengi. Nakuba uma uzinika analogue izinkampani ezifana "Dunlop" noma "Nokian", ngeke kakhulu ukulondoloza.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuhlola isidingo zenjoloba. Njengoba sekushiwo ngenhla, balithatha ukushayela evamile e wedolobhakazi ayibalulekile iphuzu kakhulu. Kubiza ngendlela engachazeki, futhi zonke izimfanelo engcono ziyabonakala phakathi ukushayela kakhulu kuphela. Kodwa uma ungumuntu drive fan, ngala mathayi ngete. Zinikeza ukuzinza okusezingeni eliphezulu ngisho ngesivinini lapho turning. I drift uya ngempela ngokushelela futhi predictably. Ngokuvamile, lokhu ingenye izixazululo engcono kuleli banga intengo zokushayela sporty.
Ezemidlalo Amathayi "Dunlop" noma "Pirelli" elinezimfanelo ezifana nakakhulu esisanda kuxoxa ngazo. Ngokusobala, unesizathu ezithile. Noma kunjalo, "Continental" kubonisa imiphumela emihle kakhulu. Ngoba nje iraba engakutholi amamaki aphezulu ezindlini ezehlukene ukushicilela nemoto ngesikhathi sokuhlola. Nokho uma izinkinga nge bafake kuwufanele kusetshenziswe ukuqondanisa ukuwuhlola, ingcindezi kule amasondo bese wahlulela izinga German. Iqiniso lokuthi ngokuvamile kuba isondo uyazigcwalisa oda 25 000 ubude ukushayela esebenzayo. Kodwa zikhona izibuyekezo, lapho cishe ngokuphelele asuswe ayizinkulungwane 5-8 run. Kuyinto encane kakhulu, ucabangela inani layo likwenza ubone.
Manje kudedelwa elisanda SportContact 6, egcwele eziqine kakhudlwana futhi kancane kuncike ukugqoka. Yiqiniso, labo abasala unganelisekile "emihlanu", akunakwenzeka ukuthatha. Kodwa kukhona abalandeli iraba isiJalimane, yena nje ukunambitha. складывается весьма положительное впечатление. Ngokuvamile, njengoba Continental SportContact 5 (225/45 / R17) eba okuvelayo omuhle kakhulu. Ikakhulukazi uyojatshuliswa ekuphatheni phezulu komgandayo ezimanzi kuka abakwazi ukuqhosha abakhiqizi abaningi. Nokho, ukunikeza oda ayizinkulungwane 25-50 isethi ngayinye hhayi wonke umuntu usulungile.
Intaba Ben Nevis, eScotland
Decal ku izingubo - izinto ozithandayo impilo entsha